"Marka Xili Ciyaareedku Dhamaado Ayaan La Hadli Doonaa" - Goolhayihii Chelsea U Waalanaysay Ee Jan Oblak Oo Farxaddii U Weynayd Siiyey Frank Lampard Ka Farxiyey Frank Lamp - Gool24.Net
“Marka Xili Ciyaareedku Dhamaado Ayaan La Hadli Doonaa” – Goolhayihii Chelsea U Waalanaysay Ee Jan Oblak Oo Farxaddii U Weynayd Siiyey Frank Lampard Ka Farxiyey Frank Lamp
Goolhayaha kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ee Jan Oblak oo ay si weyn u doonayso kooxda Chelsea ayaa daboolka ka qaaday inuu mustaqbalkiisa ka fikiri doono, isla markaana uu miiska la fadhiisan doono kooxdiisa marka uu dhamaado tartanka Champions League ee ay kooxdiisu wareegga siddeedda caawa kula ballansan tahay RB Leipzig.
Frank Lampard oo kalsooni aan ku qabin Kepa Arrizabalaga oo ah ciyaartoyga ugu qaalisan taariikhda kooxdaas ee ay soo iibsadeen, ayaa qaybtii dambe ee xili ciyaareedkan kaydka ku qabtay, waxaanu ka door-biday Willy Caballero oo tayadiisu aanay gaadhsiisnayn heerkii ay Blues u baahnayd, da’diisuna aad u weynaatay.
Jan Oblak ayaa noqday goolhayaha uu Lampard doonayo inuu geeyo Stamford Bridge, waxaana uu in muddo ah ka dhursugayay inuu ogaado waxa uu yahay damaca goolhayahni, hase yeeshee Oblak ayaa albaabada u furay Chelsea, waxaanu caddeeyey in inkasta oo waqtigan uu kaliya ku foogan yahay ciyaarta kooxdiisa ee Champions League, uu haddana mustaqbalkiisa ka fikiri doono marka xili ciyaareedku dhamaado.
Jan Oblak oo u warramayay wargeyska AS ayaa yidhi: “Waqtigani maaha xilligii ku habboonaa, kaliya Leipzig ayaan ka fikirayaa. Waxaan usoo jeedsan doonaa (mustaqbalka) marka ay dhamaato ciyaarta ugu dambaysa ee xili ciyaareedku, waxaanan rajaynayaa inaanu saddex kualn ciyaari doono. Kaddib ayaanu heli doonaa waqti aanu kaga wada hadalno.”
Atletico Madrid waxay xili ciyaareedkan kusoo jirtay dhibaatooyin badan iyagoo naadiga horyaalka ku guuleystay ee Real Madrid ka dambeeyey 17 dhibcood, booskooda Champions League ee xili ciyaareedka dambena diyaarsaday kulamadii ugu dambeeyey.
Si kastaba, hadalka Jan Oblak ayaa farxad gelinaya Chelsea oo uu si dadban ugu sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka tago Atletico Madrid, waxaana Blues ka xigta inay goolhayahan adag gacanta ku dhigaan 120 milyan oo Euro, haddii se uu Oblak dabada ka riixo iibkiisa, waxa suurtogal ah in saayiraad dhinaca qiimaha ahi yimaaddo.